Wax ka qabashada Takoorka iyo Cadaalad darada Jinsiga | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Guddiga Dugsiga Minnetonka iyo Maamulka Degmada waxay rumeysan yihiin in caddaalad darrada iyo takoorka midab takoorku leeyahay ay ku baahsan yihiin Mareykanka oo dhan iyo in bulshada dugsigeennu aysan ka badbaadin. Ardayda, Qalinjabiyeyaasha, shaqaalaha iyo waalidiinta waxay la xiriireen Maamulka Dugsiga Minnetonka iyo hogaaminta degmada dhowrkii todobaad ee la soo dhaafay si ay si geesinimo leh ula wadaagaan khibradahooda shaqsiyadeed ee takoorka sababo la xiriira jinsiyadooda, diintooda iyo / ama u jeedkooda galmada. Sheekooyinka si qoto dheer ayey u dhaqaajinayaan, waana quseeyaan. Waxaan dhageysaneynaa oo aan ku raacsanahay inay jirto shaqo ay tahay inaan sameyno si degmadeena dugsiyadu u noqoto mid soo dhaweyn iyo jawi loo dhan yahay u leh dhammaan ardayda, qoysaska iyo shaqaalaha.
Guddiga Dugsiga Minnetonka wuxuu soosaaraa tallaabooyin taxaddar ah oo la qiyaasi karo, macno leh iyo ula kac ah ee Degmadu u qaadayso xididaynta, wax ka qabashada iyo ka-hortagga takoorka ka jira dugsiyadeenna. Tallaabooyinkan waxaa la soo sheegi doonaa toddobaadyada soo socda iyada oo ujeeddooyinka sanadlaha ah ee Guddiga Dugsiyadu ay dhammaadeen.
Waxaa naga go'an ficil iyo isbedelada lama huraanka ah. Waxaan rajeyneynaa inaan iskaashi la yeelano ardayda, waalidiinta, shaqaalaha iyo xubnaha bulshada shaqadan muhiimka ah. Laguma sameyn doono go'doon waxayna u baahan tahay tixgelin feker ah. Intii lagu gudajiray jawigan hada uu sababay Cudurka faafa ee COVID-19, dhismayaasha Degmooyinkayadu hada waxay leeyihiin xadidaad dhanka awooda oo aad uyar; si kastaba ha noqotee, waxaan ka shaqeyneynaa qaab macquul ah si aan uga soo uruurinno talooyin dheeraad ah dhammaan daneeyayaasha.
Markay qorshahan xasaasiga ahi hore usocdo, Guddiga Dugsiga iyo hoggaanka Degmadu waxay u dhageysan doonaan si naxariis leh, waxay baari doonaan xag-xaggeenna waxayna go'aansan doonaan waxa aan annaguba shaqsi ahaan u qaban karno si aan u hubinno dhammaan ardayda, qoysaska iyo shaqaaluhu inay dareemaan nabadgelyo iyo aqbalaad. Waxaan qeyb ka noqon doonaa xalka, si aan ugu hogaano tusaalaha una sii wadno dhageysiga iyo barashada.
Guddoomiye, Guddiga Dugsiga Minnetonka